Isibuyekezo: "Umcwali Wezinwele weBlue Division", nguJosé Ignacio Cordero | Izincwadi Zamanje
Umcwali wezinwele waseBlue Division yindaba elandisa ngokusinda kwendoda elula ecwiliswa, ingahlosile, kwezinye zezehlakalo ezifanele kakhulu zekhulu lama-XNUMX eSpain naseYurophu. UJose Ignacio Cordero, ngephrozi ecacile nejulile, egcwele ama-nuances nobuchule, ungena ezwini lendoda esikhulile etshela impilo yayo lapho ikhumbula khona. Yincwadi eshesha futhi efundeka kalula, nayo ingikhohlisile ekhasini lokuqala.
Kunini lapho Izinhlelo ze-Altera Babenomusa ngokwanele ukungithumelela ikhophi yale noveli, angikaze ngicabange ukuthi ngingahlangabezana nencwadi enjengale. Kwase kuyisikhathi eside indaba yangifica kanjena. Ngikujabulele ukufunda le ndaba egxilile, ethulwe ngobuciko futhi eqanjwe ngobuhlakani kunanini ngaphambili. Ukuziqhenya ngesiko elihle lemibhalo nomculo, kanye nolwazi olujulile lomlando nabantu, uCordero uveza i-Extremadura ejeziswe ngosizi kanye neSpain ebhekene nobunzima bempi, hhayi lokho kuphela okushiwo ukungabi bikho kwemali.
U-Antonio, umlingiswa oyinhloko, uxoxa indaba yakhe no ukubheka emuva. Indaba iqala eminyakeni eyishumi ye- 20s, edolobheni elincane lase-Extremaduran. Ungowokuqala ezinganeni zakubo ezine. Umndeni wakhe untula imali, kepha leyo ndlu ilahlekile kakhulu. Baphoqelelwa ukusebenza ukuqoqa nokuthengisa izinkuni ngenxa yokuthi ubaba wabo akanawo umsebenzi, u-Antonio nabafowabo bahlala ebuntwaneni ngokuntula okuningi kwezomnotho nangokomzwelo.
U-Antonio, umfana othule ongafundanga, futhi ongenamsebenzi noma inzuzo, njengoba besho, usanda kufunda endaweni yezinwele zamadoda. Lapha siqala ukuqonda ukuqondana kwangempela kwesihloko, ngoba, ngaleso sikhathi, kwakuyinto evamile ngabacwali bezinwele besilisa ukubizwa ngokuthi abagundi. UDon Melquiades, uzoba ngomunye wabalingiswa ababaluleke kakhulu empilweni ka-Antonio, hhayi ngoba emfundise ukugunda izinwele, umsebenzi ongeke usebenze eBlue Division. Kodwa-ke, lokho azokufunda ngale ndoda, ngaphandle kokunikeza ama-snips amahle, lokho kuzobaluleka kuze kube sekupheleni kwendaba.
Siyazi esihlokweni ukuthi lokhu kungu- inoveli yomlando eqanjiwe. Ngakho-ke, siyazi kusukela ekuqaleni ukuthi iziphi izinhlaka zohlaka ezizokwenzeka. Lokhu kushuba, ukucabanga ukuthi "kuzokwenzekani lapho ..." futhi, kulokhu, "uzodlala luphi uhlangothi", ngeminye yemibuzo equbuka nakanjani. Siyazi ukuthi iMpi Yombango izogqashuka lapho u-Antonio eseminyakeni yokulwa. Siyazi futhi ukuthi uzogcina esehlukanisile ekulweni nobukhomanisi eRussia. Futhi siyazi ukuthi uyabuya ezokuxoxa, ngoba uxoxa le ndaba, njengoba sishilo, ekhumbula izehlakalo ezedlule. Lokho kushuba kuyinika idrama ekhethekile.
Kepha idrama enkulu inika le ndaba a leiv ugqozi ukuthi u-Antonio uhudula emaphusheni akhe, afakwe njengezimpawu zamaphupho okuthi, ngaphandle kwesixwayiso, kusimangaze kuyo yonke inoveli. Lokho leiv ugqozi likhithika. Ekuqaleni kuyamangaza, ngoba akukhona ukuthi likhithika kakhulu e-Extremadura, kepha njengoba amaphupho eziphinda, bayayiphatha le ndaba ngencazelo, yize izimo zibukeka zingenangqondo kangakanani. Wonke la maphupho aholela kokuthize futhi, njengoba leyo nto iba yinto yesikhathi esidlule futhi ophikisayo eyinqoba, iqhwa liyanyamalala. Umlingo owakhiwa yile ndaba uyindaba ethakazelisa ngempela.
Ukuthula kuka-Antonio kungenye yezimfanelo zakhe ezivelele kakhulu. Ukuthula okuzoba ngumlingiswa ophambili ezikhathini eziningi ezinqumayo futhi ezinye zezimo ezibaluleke kakhulu emlandweni ezoncika kuzo.
Ngimangazwe indlela uJosé Ignacio Cordero axhuma futhi azixazulule ngayo ngokuphelele zonke izinto ezivela esakhiweni. Akukho okushiyelwa ethubeni, noma izinhlamvu, noma amabinzana, noma amaqiniso, noma amabinzana; noma ngabe zincane, zihlala zinesiphetho noma incazelo. Kulezi zinqumo sithola kusuka kumqondo ohlakaniphe kakhulu kuya ekuchweneni okuhle kakhulu. Ngisho nangamahlaya, uCordero uyakwazi ukuxazulula ezinye zezigcawu ezinzima kakhulu emlandweni, futhi ngaphandle kokuphuthelwa okushiwo ngabalingiswa bakhe nganoma yisiphi isikhathi. Futhi akushiyi noma yimiphi imikhawulo evulekile. Wonke umlingisi ovelayo unendaba, futhi zonke lezi zindaba ziyaxazululwa.
Le yindaba yeqhawe elingazizwa njengeqhawe, elivele lasinda ngokusemandleni alo, elalilwa kuqala lapho lathinta khona nalapho lalikholelwa ukuthi lingazihlenga khona futhi, ngokushintshashintsha impilo yalo. Iphinde ikhombise umbono womfana ongayilweli imibono, kepha ngoba isikhathi sakhe, ngoba kusho ukulwa noma ukufa. Njengabanye abaningi, akayizwa impi, kepha akanayo enye indlela yokuphuma. Futhi uma esephambili ngokuzithandela, uthola ukuthi lokhu kwehluke kakhulu kunalokho ayekucabanga, ukuthi akazi kahle ukuthi ngubani "umfana omubi" ngempela. UCordero ukhombisa ubuqhawe njengendlela yokuphakamisa abantu abasha, njenge-placebo yokududuza abazali nabafelokazi, njengomklomelo wokuthethelela okungenakulungiswa.
Ukudabuka akukubi, kumane kubukelwe phansi
Lo ngumbono engiwuthathayo kule ncwadi, ongishaye kakhulu. Ngoba le yindaba ebuhlungu, ibuhlungu kakhulu. Lokhu kungenye yezinto uDon Melquiades, indoda efundile, naphezu kwehhovisi lakhe, azoyitshela u-Antonio ngesinye isikhathi, nokuthi uzokukhumbula ngesikhathi esifanele.
Kepha lolu daba lusikhombisa nokuthi ukudabuka akuhambisani nethemba nokuthi, yize kunamaphutha enziwe, usizi olususiwe, ubuhlungu obuqongelelwe, ithuba lingavela njalo lokwenza okuthile, mhlawumbe ngolunye usuku, oluzonikeza ithuba lokunikela abanye ukuthi injabulo wawungenayo futhi uthole kuyo indawo yokuthula nokuziqhenya.
Futhi phakathi kwakho konke, inani lokuthula, ukuzihlola nokuzindla.
Indawo yokwenza izinwele e ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukubuyekezwa: «Umgcini wezinwele weBlue Division», nguJosé Ignacio Cordero
j. UVicente L. Terol kusho
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ngabe umgundi wezinwele we-blue division uku-pdf.
Phendula ku-j. UVicente L. Terol
Ngiyabonga kakhulu Eva ngezincomo onginika zona, ngiyethemba ngibafanele futhi, ngaphezu kwakho konke, ngokwazisa kwakho okunembile okushiwo yile noveli.
Phendula uJosé Ignacio